सावधान ! चिन्ता लिँदा आउन सक्छन् यस्ता गम्भीर समस्या !
September 29, 2021 N88LeaveaComment on सावधान ! चिन्ता लिँदा आउन सक्छन् यस्ता गम्भीर समस्या !
किन विमानस्थलबाटै फर्काइए किरण गजमेर ?
September 29, 2021 September 29, 2021 N88LeaveaComment on किन विमानस्थलबाटै फर्काइए किरण गजमेर ?
काठमाडौं । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३ का विजेता किरण गजमेरलाई विमानस्थलबाटै फर्काइएको छ । अमेरिकाबाट कतार एयरवेजमार्फत गएको सोमबार नेपाल आएका उनलाई अध्यागमन विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइदिएको हो । एक प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा बस्न पाउने समय किरणले नेपालमा बिताइसकेकाले उनलाई फकाईएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ । “एक प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा नेपाल बस्न पाउने समय उहाँले यो वर्ष […]
सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता एमालेमा अयोग्य !
September 29, 2021 N88LeaveaComment on सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र बृजेशकुमार गुप्ता एमालेमा अयोग्य !
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षता गर्ने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट विजयी भएका दुई जना नेताले भाग लिन नपाउने भएका छन् । एमालेले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सबै सदस्यलाई सहभागी गराउने मापदण्ड बनाए पनि सूर्य चिन्हबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका हृदयेश त्रिपाठी र प्रदेशभा निर्वाचन जितेका बृजेशकुमार गुप्ताले भने सहभागिता जनाउन नपाउने […]
उत्तानो पर्‍यो बागमतीको राजनीति: मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएका पाण्डे भए हेर्या-हेर्यै !
September 29, 2021 N88LeaveaComment on उत्तानो पर्‍यो बागमतीको राजनीति: मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएका पाण्डे भए हेर्या-हेर्यै !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले अघि बढाएको प्रस्तावले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्न ढुक्क भएका राजेन्द्र पाण्डे हेरेको हेर्यै हुने भएका छन् । कांग्रेसले साढे दुई महिना बागमती सरकारको मुख्यमन्त्री आफ्नो दललाई दिन प्रस्ताव गरेको हो । तर पाँचदलीय गठबन्धनको अर्को सत्तारुढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार गरेको छैन । […]
पूर्वमाओवादी जति सबै एक हुँदै प्रचण्डले थाले यस्ताे ‘ छापामार मिसन’
September 29, 2021 N88LeaveaComment on पूर्वमाओवादी जति सबै एक हुँदै प्रचण्डले थाले यस्ताे ‘ छापामार मिसन’
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नयाँ प्रकारको एकतामा केन्द्रित भएका छन् । उनले पूर्वमाओवादीलाई एक ढिक्का बनाउने प्रयास थालेका छन् । जसको खुलासा यसै हप्ता गरिसकेका छन् । प्रचण्डले पूर्वमाओवादी नेताहरु नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, मोहन वैद्य किरण, गोपाल किराँतीलगायतसँग एकताको पहल थालेका हुन् । प्रचण्डले सबै सँग एकताका लागि छलफल बढाएका छन् […]
टिकटकबाट रू. १ अर्ब ३० करोड कमाई, यी हुन् सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति [ सूचीसहित ]
September 29, 2021 N88LeaveaComment on टिकटकबाट रू. १ अर्ब ३० करोड कमाई, यी हुन् सबैभन्दा धेरै कमाउने व्यक्ति [ सूचीसहित ]
आमाको ला’स सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टु हुरा छाेराछाेरी !
September 29, 2021 N88LeaveaComment on आमाको ला’स सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टु हुरा छाेराछाेरी !
आमाको ला’स सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टु हुरा बच्चाहरु !! यदि तिमीमा प्रेम छ भने फोटो छुनुहोस् र R.I.P. लेख्नुहोस् !! दु:खद दृश्य ,आमाको लास सडक छेउमा राखेर रुदै गरेका टुहु रा बच्चाहरु मन छुने तस्बिर यदि तपााईंसँग प्रेम छ भने यो गर्नुहोस् !****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला […]
ऋषि धमला यता दाैडधुप गर्दै ठीक्क उता क्यानडामा श्रीमतीकाे यस्तो रुपले मच्चियाे हंगामा
September 29, 2021 N88LeaveaComment on ऋषि धमला यता दाैडधुप गर्दै ठीक्क उता क्यानडामा श्रीमतीकाे यस्तो रुपले मच्चियाे हंगामा
काठमाडाैं । सामाजिक सञ्जाल सबैका लागि आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ । जसको छोटो समयमै निकै चर्चा हुन्छ । क्यानडा पुगेकी अभिनेत्री एलिजा गौतमका तस्बिरमो पनि अहिले चर्चा छ । उनी निकै खुलेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेकी छन् । विवाह गरेर सन्तान जन्मिएपछि महिला सार्वजनिक जिवनमा फर्कन सक्दैनन् भन्ने सोच उनले […]
September 29, 2021 N88LeaveaComment on ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’का विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। उनी अमेरिकी नागरिक हुन् । एक प्रवेशाज्ञा (भीसा) वर्षमा अमेरिकी नागरिकहरुले १ सय ८० दिन मात्र नेपाल बस्न पाउँछन् । गजमेरले नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारी सकेकाले अध्यागमनले उनलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको हो । गजमेर सन् २०२१ भर […]
यी हुन् संभावित नयाँ मन्त्रीहरू
September 29, 2021 September 29, 2021 N88LeaveaComment on यी हुन् संभावित नयाँ मन्त्रीहरू
काठमाडौं । लामो समयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । देउवाले माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)सँग मन्त्रीको नाम मागेको स्रोतले जनाएको छ । देउवाले संभवत बुधबार वा बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारी गरेका छन् । देउवाले कांग्रेसको तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता […]